Rakibayaasha kulul Solar Oo Farsamayaqaano Job Description / Hawlaha Oo Sample Waajib – JobDescriptionSample.org
Home / Uncategorized / Rakibayaasha kulul Solar Oo Farsamayaqaano Job Description / Hawlaha Oo Sample Waajib
Rakibayaasha kulul Solar Oo Farsamayaqaano Job Description / Hawlaha Oo Sample Waajib
Ku rakib ama soo celin barnaamijyada tamarta qoraxda loogu talagalay in ay isku uruursadaan, dukaanka, iyo wareejin biyo PV-diiran loogu talagalay qoyska, warshadaha ama ganacsi isticmaalka.
Job Skills Horudhac ah
Design firfircoon degdeg ah ama dadban degdeg ah ama aan toos ahayn, ama wadaagaan qoraxda-nidaamyada.
Qabtaan daryeelka joogtada ah ama la rajeenayo in la soo celiyo farsamooyinka qoraxda in ay yihiin kaamerada xaaladaha aasaasiga ah ee la socda.
Labels in qaybaha habka, sida ama aqoonsiga sumadaha ama habka loo baahan yahay shaqaaleeyaan.
Falanqeeyaan websites ururiyaha farta ururiya qoraxda iyo si loo hubiyo sharafta dhismaha ee laga yaabee in lays ugu weyn ama dhici kara meelaha goor wanaagsan.
Ku biir haamo biyaha lagu keydiyo iyo kululeeyayaasha biyaha ilo korontada iyo biyaha.
In la dhiso meelaha ku saabsan qaybaha nidaamka-sub qorraxda ku rakibidda, ay ka mid yihiin biyo-kululeeyayaasha, tuubooyinka, filtarka, iyo qalabka qofka jirran.
Dad taangiyada tuubooyinka, iyo accessories for aada meelaha.
hanjabaad Protection, korontada, deegaanka dabiiciga ah, ama la aqoonsado tuubooyinka la xiriira rakibo kaamerada qoraxda.
Diraysa dhaqaaqin bambooyin la isticmaalayo qalabka kabida,, Alaabeynta, biibiile, Koronto, iyo qalabka gacanta.
Mount copper ama tuubooyinka isticmaalaya tuubooyin cheap, qalabeysan qoryihii alxamaad, Alxan, burush xadhig, maryihii oo ciid, daadanayo, cheap biibiile-nadiifiyo, ama epoxy caag ah.
Ku rakib -plat siman, bariyeelay ee ku aruuriya ee qoraxada ku darbi in ay kor u kacayso, ama galaas, isticmaalaya taageerada ama struts.
exchangers kulaylka Mount iyo dheecaannada Iskubedelka kulaylka ku salaysan schematics oo buugagan rakibaadda.
Diraysa arrimo nidaam la socodka, cabirrada cadaadis, iyo sida tusaale ahaan yards dhaqdhaqaaqa, aaladaha heerkul, sida ay design farsamo iyo Details soo saare.
Mount tuubooyinka, sida tusaale ahaan kor tuubooyinka, accessories Afyare, filtarka weel yaraadan, stress filtarka raaxada kulaylka, ama quraaradda, oo ku salaysan sifooyinka soo saaraha iyo codes dhismaha.
la taaban karo, rakibi ururiyaha qorraxda qalabka sii kordhaya on leben, shingle, ama dhisay-up rooftops quruurux, codsanaya dhaqanka gudbinta iyo qaybaha ku habboon.
Diraysa ilaaliyaal nidaamka qoraxda-kulka iyo qaylodhaan.
hawlgalka Exam ama qalliin awoodda, tuubooyinka, jirka, iyo gacanta-nidaamyada.
Dhaqangelinta dhow cimilada, sida tusaale ahaan dawaayn iyo flashings tube, si penetrations saqafka iyo aaladaha kuwa dhismaha ah.
Iska yaree iyo diirimaad tuubooyin epoxy dahaar tuubooyin tuubooyinka iyo accessories.
Muuji bilowdo, xidhay hoos gorfaynta, ilaalinta,, iyo hababka ammaanka in ganacsatada habka tamarta.
Shaqaaleeyaan ammaanka shucaaca UV si looga hortago nabaad ee tuubooyinka.
Career raad Baahan
Akhrinta cutubyada fahamka-fahamka iyo weedho abuuray in files shaqada ku jira ee la xiriira.
Active Dhagaysi-Siinta waxa dadka kale ku yidhi dareenka guud ee, waqti isuna si aad u fahmaan waxyaabaha la sameeyo, codsanaya weydiimo sida fiican, oo aan mesmerizing at dhacdo in ay khaldan yihiin.
Qorista-In qoraal ma aha sida aan habboonayn ee baahida dhagaystayaasha hadalka ku ool ah.
Ka hadalka-hadalka dadka kale in la xuso macluumaad wax ku ool ah.
Xisaabta-Isticmaalka xisaabta si ay u xalliyaan masalooyin.
Technology-Isticmaalka xeerarka gacanta iyo farsamooyinka si ay u xalliyaan arrimaha.
Halis-ka fakaraya-Dalbashada sababta oo u maleeyey in la aqoonsado faa'iidooyinka iyo khasaaraha of natiijooyinka, fursadaha kale ama habab dhibaatooyin.
Active Learning-Aqoonta lugaha faahfaahinta cusub oo kasta xalinta dhibaatada iyo go'aan-qaadasho la soo dhaafay iyo mustaqbalka.
Barashada Xeeladaha-Doorashada iyo shaqaalaynta hababka coachingANDeducational iyo nidaamka ku habboon xaaladda marka barashada ama waxbaridda waxyaabaha cusub.
shaqeynta Monitoring-OverseeingORDetermining naftaada, oo qof oo ka duwan yihiin, ama ganacsiyada ka fiirsan falalka sixid ah ama in ay curiyaan horumar.
Social Perceptiveness-Ahaanshaha ma ah mid halmaansan badnaanta othersA iyo fahamka halka ay sameeyaan sababta ay fal.
falalka Coordination-qabsashada la eego hawlaha othersI.
Salesmanship-xaadh kuwa kale inay wax ka beddelaan ama madaxooda.
Xalinta Khilaafaadka-Helidda dadka kale si wadajir ah oo isku dayaya in ay heshiiyaan kala duwanaansho.
Bara-baro dadka kale loogu taraaroxo u dhaqaaqdo.
Orientation-Positively Service raadinayaan habab si loo caawiyo dadka.
Advanced dhibaato xalinta-Aqoonsiga dhibaatooyin sare iyo critiquing xaqiiqooyinka in xiran yahay codsan fursadaha iyo baaro iyo in la dhiso ilaa fursadaha.
Ganacsi shuruudaha item Qiimeynta-Kormeerida iyo u baahan tahay si ay u abuuraan style a.
qalabka ama dhalin iyo technology in ay bixiyaan shuruudaha shaqsi Technology Design-Lahaanshaha.
Tools qalab Selection-Go'aaminta iyo qalabka ee nooca loo baahan yahay si dhab ah in la sameeyo xirfado.
waxyaabaha ku rakibidda-darista, alaabta, kaybalka, ama baakadaha si ay ula kulmaan Details.
Sireed-Qorista codsiyada computer ku saabsan ujeedooyinka in tiro badan yihiin.
Hawlgallada baaritaano Tracking-arkaa, wicitaanada, ama calaamadaha kale si loo hubiyo in qalabka la haboon oo shaqeeya.
hawlaha shaqada iyo Control-Xakamaynta farsamooyin ama qalabka.
Dayactirka-Bandhigyada dayactirka in uu yahay joogtada ah ee qalabka iyo go'aan goorta iyo nooca ilaalinta lagama maarmaan noqoto.
arrimo dhib-Go'aansiga dambeeya qaladaad shaqada iyo go'aan ka waxa la sameeyo oo ku saabsan.
waxyaabaha ama barnaamijyada isticmaalka hababka la doonayo doonnida-Daboolid.
imtixaanaadka iyo kormeerka ee alaabta Tayada-Control Research-Samaynta, bixiyeyaasha, ama farsamooyinka in lagu qiyaaso fiican ama qaab.
Xigmad iyo Go'aan-la tixgaliyo ku eedeeyay guud iyo faa'iidooyinka ka mid ah tallaabooyinka ay suurtagal tahay in la doorto mid ka mid ah ku haboon.
Systems Falanqaynta-go'aansado waxa sort of habka waa in ka shaqeeyaan iyo sida isbadalada duruufaha, hawlaha, iyo sidoo kale jawiga saamayn doonaa saamaynta.
Hababka falalka Falanqaynta-kala ama calaamadaha waxqabadka nidaamka iyo sidoo kale marka loo eego goolasha ee qalabka sax ama dabeecada loo baahan yahay si kor loogu qaado ka shaqeynayaan.
Time-Management-Xakamaynta oneis munaasabadda gaar ah.
Management of Savings-Go'aaminta sida doolar waxaa laga sugayaa inay la qaatay in la helo shaqo sameeyey, iyo iibka ku saabsan kharashyada kuwan.
Hawlgalka of Product Ilo-Helidda iyo arkaysid in loo isticmaalo ku haboon ee qalabka, hiilaadka, iyo qalabka si dhab ah loo baahan yahay in aadan soo xulay shaqeeyaan.
Maamulka shaqaalaha Resources-Riixista, dhismaha, iyo shakhsiyaadka hagaya sida ay u shaqeeyaan, kala ah dadka waawayn oo aad u fiican ee aad shaqo.
Shuruudaha tababarka Need Experience
Degree Senior High School (ama GED ama Senior Certification School isu Sare)
Fasalada Dugsiga badan ayaa
Shaqo Leadership Skills Shuruudaha
dheganaanta – 86.61%
Rabitaan – 89.41%
Gargaarka – 89.31%
Dhibaatada for Qaar kale – 87.25%
Direction Cultural – 86.27%
Is-Control – 84.20%
Dulqaadanayn cadaadis – 83.40%
joogtona – 93.00%
Fiiro gaar ah u Details – 93.60%
daacadnimo – 90.80%
Hal-abuurka – 81.40%
Fikirka – 89.43%